Paompy menaka pneumatic mandeha amin'ny rivotra | Paompy fanosorana menaka an'habakabaka
Paompy fanosorana menaka an'habakabaka
Home/Paompy elektrika famenosana herinaratra/APG andian-drivotra miasa, pneumatic grease paompy, rivotra menaka fanosotra paompy
1. Rivotra miasa, menaka fanosotra paompy
2. Max. seranana fivoahana menaka ho an'ny fanosotra haingana
3. Fitaovana amin'ny menaka-rano separator, injector sy ny mpampiantrano, fanompoana ela velona
APG Air Operated, Pneumatic Grease Lubrication Pump Fampidirana
APG Series an'ny Air grease lubrication paompy manana stable fampisehoana, mafy practicability sy tsara tarehy. Ny pneumatic grease paompy dia fitaovana tena ilaina ho an'ny mechanization ny menaka na menaka tsindrona fitaovana, dia entin'ny rivotra compresses ary manana naorina-in automatique reciprocating fitaovana mba ho tonga dia mamaly miakatra sy midina. Mba hanery ny fanerena ambony sy hitondra ny menaka na ny menaka mba hamahanana ny menaka fanosotra.
Hudsun air grease paompy dia azo antoka, azo ianteherana, fanerena miasa avo, menaka lehibe na menaka Output ny tahan'ny, mora ny miasa, avo famokarana fahombiazana, ambany hamafin'ny asa, dia ho afaka manampy isan-karazany ny Lithium fototra menaka, menaka sy ny hafa viscosity avo. menaka, mety amin'ny fiara, traktera, mpangalatra ary karazana indostrian'ny milina hafa izay feno menaka na menaka.
APG Air Operated, Pneumatic Grease Pump Fitsipika miasa
Hudsun APG Series an'ny Air Grease Lubrication Pump sy ny grease grease dia ahitana paompy piston grease mifandray amin'ny paompy rivotra pneumatic, izay antsoina hoe paompy menaka pneumatic, miaraka amin'ny fitehirizana menaka ho an'ny menaka, basy grease, hose fingotra avo lenta. , ary fiaraha-miova haingana sy ampahany hafa.
1. Ny tapany ambony amin'ny paompy menaka pneumatic dia paompy rivotra, ary ny rivotra voatsindry dia miditra ao amin'ny efitrano fitsinjarana ny rivotra amin'ny alàlan'ny valva spool, ka ny rivotra miditra amin'ny farany ambony na ny faran'ny ambany amin'ny piston, mba hidiran'ny piston. mifamaly ho azy amin'ny kapoka sasany mba hamadika ny fidirana sy ny setroka.
Ny tapany farany ambany amin'ny paompy menaka pneumatic dia paompy piston, ary ny heriny dia avy amin'ny rivotra miditra, ary ny tsorakazo mampifandray dia sintonina mifanaraka amin'ny paompy rivotra mba hitazonana ny hetsika miverina. Misy valva fanaraha-maso roa ao amin'ny paompy piston, ny iray dia eo amin'ny seranan-tsambo fidirana solika ary apetraka eo amin'ny tsorakazo manainga, izay antsoina hoe valva tongotra efatra, ary ny famehezana tombo-kase ny tsorakazo famahanana ary ny famehezana ny fiaramanidina efatra tongotra. . Ny seranana fivoahana solika hafa amin'ny faran'ny tsorakazo piston dia valva baolina vy, izay voaisy tombo-kase amin'ny cone. Ny asan'izy ireo dia ny mihetsika mifamadika amin'ny synchronization amin'ny paompy menaka. Rehefa miakatra miakatra ny tadin'ny piston dia mihidy ny valva baolina vy.
Ny takela-pananganana mifandray amin'ny tsorakazo manainga dia mampiakatra ny menaka miakatra, ireo menaka ireo dia manosika ny valva tongotra efatra miakatra hiakatra hiditra ao amin'ny paompy, ary ny valva baolina vy dia misokatra miakatra mba hanesorana ny menaka; rehefa midina midina ny tadin'ny piston dia midina sy mihidy ny valva misy tongotra efatra, ny menaka ao amin'ny paompy dia potehin'ny piston rod ary ny valva baolina vy dia misokatra indray mba hanesorana ny menaka, mba hahafahan'ny paompy fanosorana toy ny raha mbola mifamaly ambony sy midina.
2. Ny peratra piston voaisy tombo-kase dia napetraka tao amin'ny barika fitehirizana, ka ny menaka ao anaty barika dia voatsindry amin'ny fanerena ny lohataona hanindry ny piston amin'ny tavy, izay afaka manasaraka ny loto sy mitazona ny menaka madio, ary miaraka amin'izay koa fotoana, afaka mitroka tanteraka ny menaka amin'ny alalan'ny menaka ny paompy seranan-tsambo.
3. Ny basy tsindrona menaka dia fitaovana mandritra ny asa famenoana menaka. Ampifandraisina amin'ny hose fingotra fingotra avo lenta ary alefa any amin'ny basy ny menaka fanerena avo lenta avy amin'ny paompy. Ny nozzlen'ny basy dia mifandray mivantana amin'ny toerana famenoana menaka ilaina, ary ny trigger dia ampiasaina hanindrona ny menaka ao amin'ireo teboka ilaina.
(2) APG = APG andian-drivotra miasa, pneumatic paompy menaka
(3) Volon'ny barika menaka = 12L ; 30L ; 45L (Jereo ny tabilao etsy ambany)
(4) Halavan'ny hose = 4m ; 6m ; 10m ho an'ny safidy, na namboarina
Volume barika 12L 30L 45L
Tsindrin-drivotra miditra 0.6 ~ 0.8Mpa 0.6 ~ 0.8Mpa 0.6 ~ 0.8Mpa
Tomban'ny fanerena 50: 1 50: 1 50: 1
Fanerena ny fivoahan'ny menaka 30 ~ 40Mpa 30 ~ 40Mpa 30 ~ 40Mpa
Volan'ny famahanana 0.85L / min. 0.85L / min. 0.85L / min.
Equipped With Basy tsindrona, Hose Basy tsindrona, Hose Basy tsindrona, Hose
Ahoana ny fampandehanana ny APG andiam-pamokarana menaka pneumatic
(1) Apetraho ao anaty fitoeran-tsolika fitehirizana ny fitaovana ny menaka fanosotra (na ampidiro ao amin'ny barika mahazatra ny fitaovana), ary apetraho araka ny fatra ilaina. Mba hisorohana ny firongatry ny rivotra miboiboika, ny menaka ao amin'ny barika dia tokony ho tsindriana ambany ary ny ambonin'ny menaka dia tokony ho fisaka.
(2) Mampiasà menaka araka ny vanim-potoana, amin'ny ankapobeny dia mampiasa 0 #-1 # lithium base grease amin'ny ririnina, mampiasa 2 # lithium grease amin'ny lohataona sy fararano, ampiasao 2 #-3 # lithium grease amin'ny fahavaratra, mba hisorohana ny viscosity be loatra ny menaka, mba asio ampahany kely afangaro tsara ny menaka. Fanamarihana: Ataovy madio ny menaka.
(3) Ampifandraiso amin'ny hose fanerena ny fitaovana sy ny basy fanosotra. Rehefa mampifandray dia tsy maintsy manadio ny tonon-taolana sy hanenjanana kokoa ny voanjo amin`ny wrench mba hisorohana ny solika leakage.
(4) Manomàna rivotra voaporitra amin'ny 0.6-0.8 MPa.
(5) Ampidiro ny fikambanan'ny fanovana haingana amin'ny fantsona ny loharano pneumatic.
Dingana fiasan'ny APG Pneumatic Grease Pump
– Atsofohy ny loharanon-drivotra, ampidiro ao amin'ny fidiran'ny rivotra amin'ny fitaovana ny mpampitohy fanovana haingana. Amin'izao fotoana izao, ny piston cylinder amin'ny fitaovana sy ny piston paompy dia miverina miakatra sy midina, reraka ny seranana muffler, ary manomboka miasa ara-dalàna ny fitaovana. Ny menaka dia mameno tsikelikely ny fantsona, miakatra tsikelikely ny tsindry. Rehefa afaka kelikely, dia mihena ny fatran'ny fihetsiketsehana mifamadika mandra-pijanonany, ny fanerena ny menaka dia manana sanda avo, ny paompy rivotra sy ny fanerena ny menaka dia ao anatin'ny equilibrium, ary ny fitsapana ny menaka dia tsindrona. Ny grease avo lenta amin'ny basy dia tsindrona avy amin'ny nozzle grease. Rehefa voatsindrona ny menaka, dia mirona tsy mifandanja amin'ny fifandanjana ny paompy menaka, ary ny menaka dia averina amin'ny alàlan'ny hetsika miverimberina mandeha ho azy. Rehefa mahatratra ny sanda ambony indrindra ny fanerena menaka dia mijanona ho azy ny paompy.
– Jereo raha misy leakage isaky ny faritra mifandray, dia manao famenoana menaka.
Fisorohana sy fikojakojana ny paompy fanosorana menaka APG an'habakabaka
1. Ny rivotra pneumatic voaporitra dia tokony hosivanina mba hisorohana ny loto tsy hiditra ao amin'ny paompy rivotra ary mitafy ampahany amin'ny ampahany sy cylinders azo ampiasaina. Voarara tanteraka ny fampiasana entona mirehitra ho loharanon-drivotra.
2. Aza mampiasa rivotra mipoitra eo ambonin'ny 0.8MPa mba hisorohana ny fampihenana ny fitaovana ary hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny sodina avo lenta.
3. Ny fantsona fingotra fingotra avo lenta dia tsy mamela ny fiondrika mafy sy ny fisintonana amin'ny tany mandritra ny fampiasana, ary ny zavatra mavesatra dia hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny serivisy.
4. Rehefa miala sasatra ny asa, dia tokony hesorina ny mpampitohy rivotra haingana, ary ny basy feno menaka dia tokony hanaisotra ny fanerena solika ao amin'ny fitaovana mba hisorohana ny fanerena amin'ny hosoka avo lenta mandritra ny fotoana maharitra.
5. Ny ampahany amin'ny paompy rivotra dia tokony hosorana tsy tapaka.
6. Mandritra ny fivorian'ny fivoriambe sy ny disassembly, dia tsy maintsy jerena ny fahamarinan'ny ampahany ho rava.
7. Aza mamaly mandritra ny fotoana maharitra tsy misy entana, misoroka ny friction maina ary misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny serivisy.
8. Manaova asa fanadiovana sy fikojakojana tsara. Diovy ny rafitra fandehanan-tsolika manontolo ao anatin'ny fe-potoana iray, esory ny basy fanosotra amin'ny basy fanosotra, ary ampiasao ny milina fanadiovana mba hamerenana imbetsaka mba hanesorana ny loto ao anaty fantsona. Diovy tsy tapaka ny toby fitahirizana mba hadio foana ny barika.
Fampiharana ny APG Air Grease Lubrication Pump
[email voaaro]2021-11-17T21: 51: 27 + 00: 00